အထွေထွေ Archives - Page4of 680 - Focus Myanmar
မိဘကို ကျွန်တစ်ယောက်လိုဆက်ဆံသူတွေအတွက် ပညာပေးဇာတ်လမ်းတိုလေး မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
ဟာသ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဖြူဖြူထွေး ဟာဆိုရင် ဟာသတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ကျေနပ်နှစ်သက်မှုရှိအောင် ဖျော်ဖြေတင်ဆက် ပေးနေဆဲဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃နှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြည့်ပြည့်၀၀ ရမယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော…!
Zawgyiဖြင့်ဖတ်ရန် ၃ နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ပြည့်ပြည့်၀၀ပေးနိုင်ဖို့လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မကွေးတိုင်းကိုရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဒီကနေ့ မေလ ၉ ရက်နေ့မှာ မကွေးတိုင်းကပြည်သူတွေနဲ့မကွေးမြို့မှာတွေ့ဆုံစဉ်မှာပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်မှာ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်းနှုန်းရရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီး နောက် ၂ နှစ် ၃ နှစ်အတွင်းမှာတော့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပြည့်ပြည့်၀၀ ရရှိနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်။ Photo -Myanmar State Counsellor Office မကွေးတိုင်းဒေသကြီးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းက ရွှေစက်တော် ဘုရားနဲ့ မကွေးမြို့က မြသလွန်စေတီတော်ကိုသွားရောက်ဖူးမျှော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်ညနေပိုင်းမှာတော့ မကွေးမြို့က ခန်းမမှာ ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့ တွှေဆုံပြီး ပြည်သူတွေရဲ့အခက်အခဲတွေကိုနားထောင်ပြီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းမှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်လုပ်မယ့် ကိစ္စတွေကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Unicodeဖွငျ့ဖတျရနျ ၃ နှဈတာကာလအတှငျးမှာ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးလြှပျစဈဓါတျအား ပွညျ့ပွညျ့၀၀ပေးနိုငျဖို့လုပျဆောငျနတေယျလို့ နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျကပွောဆိုလိုကျပါတယျ။ […]
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းကို ရောက်ရှိအပန်းဖြေနေတဲ့ စည်သူဝင်းရဲ့ ကြွေလောက်စရာ အမိုက်စားပုံရိပ်များ
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညောလာကမှာ မိန်းကလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ သည်းသည်းလှုပ်အားပေးဝန်းရံမှုတွေကို အခိုင်အမာရရှိထားသလို
ယောင်္ကျားလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးမှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ မင်းသားချောကတော့ စည်သူဝင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
နစ်နာစေတဲ့ အချစ်မျိုးဖြစ်အောင်မချစ်ကြဖို့ သတိပေးလိုက်တဲ့ ပုညခင်
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေ ကတည်းက ရင်သပ်ရှု့မောဖွယ် ဇာတ်အချိုး အကွေ့ အဖွဲ့ အနွဲ့ အသုံးအနှုန်း တွေနဲ့ ဝတ္ထုစာအုပ်ပေါင်း များစွာ ထုတ်ပြီး ပရိသတ်တွေ ရင်ထဲကို
တစ်နေ့လုံး ကုလားထိုင်ပေါ်မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတဲ့ ရုံးအလုပ်သမားတွေအတွက်တော့ အိမ်ပြန်ရောက်တာနဲ့ အိပ်ရာပေါ်ပစ်လဲလိုက်ရတဲ့ အရသာ၊ အနှိပ်ခံလိုက်ရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မျှမလဲနိုင်ပါဘူး။ ကျောကုန်းကို လာပွတ်ပေးရင်တောင် ကောင်းကင်ဘုံရောက်နေသလို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ အိမ်ထောင်ရှင် ရုံးဝန်ထမ်းတွေ အတွက်ကတော့ ကလေ
လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ကိုဝလုံး နဲ့  ကိုကျော်စိုးဦး
ဒီနေ့မေလ (၇)ရက်နေ့မှာ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့်စာ နဲ့အတူ အကျဉ်းသား/သူစုစုပေါင်း ၆၅၂၀ယောက်ကိုလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်း ကိုအားလုံးသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ အဲ့ဒီထဲမှာအားလုံးမျှော်လင့်နေကြတဲ့ သူတွေတော်တော်များများလည်း ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။
စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်လေးတွေအတွက် ခိုင်နှင်းဝေ ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် စကားလေး
ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကသရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး အခုနောက်ပိုင်း ရုပ်ရှင်ပိတ်ကားတွေပေါ်မှာ သိပ်မတွေ့ရတော့ပေမယ့် ပရဟိတ လုပ်ငန်းတိုင်းလိုလို အလှူတိုင်းလိုလိုမှာ တွေ့နေရသူတစ်ယောက်ကတော့ ခိုင်နှင်းဝေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ခိုင်နှင်းဝေ ဟာ အခုနောက်ပိုင်း ပရိဟိတ လုပ်ငန်းတွေကို ပါ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်နေပြီး ပရဟိတ မင်းသမီးလေးလို့ပါ လူတိုင်းက ခေါ်ဝေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း သူမဟာ မိဘမဲ့ စွန့်ပစ်ခံ ကလေးငယ်တွေအတွက် တကယ်ကို မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်ပေးနေပြီး မိခင်အရင်းတစ်ယောက်လို ကူညီနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ရန် ဖခင်ဦးအောင်ရင်ကလည်း အထင်ကရနာမည်ကြီးအဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မိုးအောင်ရင် ဟာ မူးယစ်ဆေးဝါးလက်ဝယ်တွေ့ရှိမှုနဲ့ ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရတယ်ဆိုတာကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေပေးတိုင်းလည်း မိုးအောင်ရင် ပါလာမလားရယ်လို့ မျှော်ကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေ ၊ ပရိသတ်တွေကလည်းဒုနဲ့ဒေးပါပဲ ။ အခုကျနော်တို့ပရိသတ်ကြီးကို ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါးချင်တာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဒီ ကနေ့မေလ (၇)ရက်နေ့မှာသမ္မတကြီးရဲ့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ အကျဉ်းသား ၆၅၂၀ဦးကို ရာဇာဝတ်ကျင့်ထုံးဥပဒေ ပုဒ်မ၄၀၁၊ပုဒ်မခွဲ(၁)အရ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်မထားဘဲ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီပေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာတော့ မိုးအောင်ရင်ပါဝင်လာခဲ့တယ်ဆိုပြီး သတင်းရပ်ကွက်အချို့ကနေသိရပါတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်တော်ပြန်လာမယ့် မိုးအောင်ရင်ကို မျှော်နေကြသူတွေအတွက်တော့သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ။ မိုးအောင်ရင် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ။ အနုပညာအလုပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြန်လည်လုပ်ကိုင်မှာလား မလုပ်ကိုင်ဘူးလားဆိုတာကတော့ သိရသေးပေမယ့်သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ သူ့ရဲ့အနုပညာတွေကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်တွေ့မြင်ခံစားချင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပြောချင်လွန်းလို့အဖွဲ့သားတွေကလည်း မိုးအောင်ရင် ပြည်တော်ပြန်လာခြင်းကို ဝမ်းမြောက်စွာကြိုဆိုပြီး အနုပညာအလုပ်တွေအမြန်ဆုံးပြန်လည်လုပ်ကိုင်နိုင်ပါစေလို့ တောင်းဆုပြုလိုက်ရပါတယ် ခင်ဗျာ။ Unicode ဖွငျ့ဖတျရနျ ဖခငျဦးအောငျရငျကလညျး […]
လူသိနည်းတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီး ရဲ. အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းများ
ကြက်ဟင်းခါးသီး၏ စွမ်းပကား ခါးသက်သက် အရသာရှိတဲ့ ကြက်ဟင်းခါးသီးဟာ အပူပိုင်း စိုစွတ်တဲ့ရာသီမှာ ပေါက်လေ့ရှိပြီး အဓိကအားဖြင့် အာရှတိုင်းပြည်တွေနဲ့ တောင်အမေရိကတွေ မှာ တွေ့ရပါတယ်။
ပဏ္ဍိတရာမ ဆယ်မိုင်ကုန်းတရားရိပ်သာသို့နှစ်စဉ် နိုင်ငံခြားသားယောဂီများလာရောက်၍ တရားအားထုတ်ကြပါတယ်..(ဒီဇင်ဘာလနဲ့ ဇန်နဝါရီလများကို နိုင်ငံခြားသားယောဂီများအတွက်သီးသန့်အချိန်အချိန်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်)